कुनै व्यक्ति वा कुनै चीज छुँदा तपाईंलाई करेन्टको झट्का लाग्छ ? यसलाई स्टेटिक करेन्ट भनिन्छ अनि जाडोमा यस्तो करेन्ट बढी लाग्छ । स्टेटिक करेन्टपछाडिको विज्ञान के हो ?
हाम्रो शरीरले हामीवरपरका कुराबाट अतिरिक्त इलेक्ट्रोन जम्मा गर्छ । यसबाहेक केही किसिमका कपडा र अन्य तत्त्वले पनि यसमा योगदान गर्छन् । नाइलन वा ऊनबाट बनेको कार्पेटमा हिँड्दा वा रबर सोल भएको स्पोर्ट्स शूज लगाउँदा शरीरमा इलेक्ट्रोनको चार्ज धेर बढ्छ ।
शरीरमा इलेक्ट्रोन चार्ज बढ्दै जाँदा व्यक्तिको छालामा त्यो जम्मा हुँदै जान्छ । त्यहाँ त्यो शक्तिशाली हुन्छ अनि अर्को व्यक्ति वा धातुलाई छुनेबित्तिकै त्यसमा ट्रान्सफर हुन्छ ।
यसबीचमा यो चार्ज छोइएका दुवै विन्दुबीचको हावालाई हटाएर जम्प गर्छ जसकारण सानो झिल्का पनि निस्कन्छ । यही कारणले हामीलाई झट्का लाग्छ ।
हावाले करेन्ट पास गर्न बाधा गर्छ तर यसमा वाटर भेपर मिसियो भने पानीका मोलिक्युलहरूले तीव्रताका साथ करेन्ट पास गरिदिन्छन् । जाडो मौसममा हावा सुक्छ जसले गर्दा इलेक्ट्रोन तीव्रताका साथ एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छ । त्यसैले गर्दा जाडोमा एकअर्कालाई छुँदा वा कुनै कुरालाई छुँदा करेन्ट लाग्छ ।
यस्तो सरप्राइज करेन्टबाट बच्नका लागि ऊनी कपडा कम लगाउन सकिन्छ । यसबाहेक स्पोर्ट्स शूज नलगाएर छालाको जुत्ता लगाउँदा पनि यसबाट बच्न सकिन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार, आफ्नो नजिक रहेको धातु छोएर पनि इलेक्ट्रोन बन्नलाई रोक्न सकिन्छ । त्यसले तपाईंलाई चर्को झट्का लाग्न दिँदैन ।
भुइँमा सुत्नुका फाइदा, पढेपछि शायद ओछ्यानमा सुत्न ...